Akụkọ Samsung: Akụkọ, ekwentị, mbadamba na ndị ọzọ - Androidsis Gam akporosis
Samsung bụ otu n’ime ụlọ ọrụ amaara ama ama ama ama na South Korea, yana ọnụnọ zuru ụwa ọnụ. Companylọ ọrụ a maara maka ịmepụta ụdị ngwaahịa kọmputa (telivishọn, ncheta, kọmputa ...) yana mbadamba na smartphones na gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ. Samsung bụ ụlọ ọrụ ekwentị kacha ere ugbu a.
A na-eji ekwentị Samsung amata àgwà ha, yana nkọwa dị mma, atụmatụ dị mma yana ọnụ ahịa agbanwe. N'ime otu a ị ga - enwe ike ịchọta ozi niile gbasara ụlọ ọrụ na ekwentị ya. Akụkọ niile, nkwalite na nyocha nke ekwentị nke ụlọ ọrụ Korea.
[Na] Otu esi hazie ihuenyo mkpọchi nke Samsung Galaxy
por Manuel Ramirez eme Ọnwa 4 .
Site na mkpọchi dị mma, anyị ga - egosi gị mmelite ọhụrụ maka One UI 3.0 nke otu ...
por Ignacio Sala eme Ọnwa 4 .
Ozugbo Xiaomi gosipụtara ọnọdụ ya maka ekwentị mpịachi, a manyere anyị ịtụle ...
Samsung weputara Galaxy XCover 5: ama ama ama ama
por Ignacio Sala eme Ọnwa 5 .
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọtụtụ smartphones ndị ruru ahịa na afọ ndị na-adịbeghị anya, na-eguzogide ...
Mbupute ọzọ nke Galaxy Tab A7 Lite ka akwadoro
Ikpeazụ September, Samsung ulo oru na Galaxy Tab A7, ndị kasị echekwa nso nke mbadamba si Korean ibu….
855 Snapdragon 2019 Ga-agbake na Galaxy A82 5G - Ekwentị Na-egosi Na Geekbench
por Aaron Rivas eme Ọnwa 5 .
Galaxy A82 5G bụ otu n'ime smartphones na-esote site na Samsung. Ọtụtụ asịrị banyere nke a ...
New ịrịba ama nke Samsung doo nke Wear OS na ya smartwatches
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị bipụtara otu isiokwu nke anyị gwara gị banyere akụkọ kachasị ọhụrụ metụtara ọgbọ ndị ọzọ ...
Otu UI 3.1 maka Galaxy Tab S6 na-ebupụta ọnwa abụọ tupu oge
Ọzọkwa, ụmụ okorobịa na Samsung na-egosi na mmasị ụlọ ọrụ ahụ nwere imelite igwe ha gara ...
Ndụ na ịgba egwu: Galaxy SII na-anata ọdụ ụgbọ mmiri nke LineageOS 18.1 na gam akporo 11
por Manuel Ramirez eme Ọnwa 5 .
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 10, Galaxy SII nke Samsung ka dị ndụ na ọdụ ụgbọ mmiri ...
Ihe nche nche nke ọnwa maka Galaxy Tab S7 dị ugbu a
Otu ihe akaebe ọzọ nke Samsung etinyela batrị na usoro nke mmelite, anyị nwere ya na akụkọ ...
Samsung Galaxy Fold Na-enweta Otu UI 3.1 Mmelite
Samsung gara n’ihu na-agbasawanye mmelite One UI 3.1 maka igwe dị n’etiti ya na nke dị elu. Oge a ọ bụ ...
Samsung Galaxy A32 4G bụ onye ọrụ ya na Helio G80 na One UI 3.1
por Onyeka Onwenu eme Ọnwa 5 .
Onye isi Asia kpebiri ikpebi ụdị Galaxy A32 4G na Russia, ihe a niile na-eme ka atụmatụ ụfọdụ ka ...
Etu ibudata ngwa ọrụ gọọmentị maka ọnụahịa Samsung
Samsung Galaxy Tab S4 ga-eweta na August 1
A na - enyocha nzacha mbụ nke Samsung Galaxy Tab S4
Samsung Renove: usoro ego maka Galaxy S9
Galaxy S9 na S9 + na-akwado kaadị microSD ruo 400GB
Samsung Galaxy S9 bụzi gọọmentị, nkọwa niile na atụmatụ nke ọhụụ Samsung ọhụrụ
Yoigo na-enye anyị Galaxy S8 site na ịchekwa euro 300
Samsung Gear Sport nche dị ugbu a na Spain
A na-ekpughere ekwentị ọhụrụ 'clamshell' Samsung W2018 na China
Galaxydị Galaxy S9 leaked na Geekbench
Samsung Galaxy J5 (2017) na - enweta mmelite nche megide BlueBorne
Samsung Gear IconX, mmetụta izizi na IFA 2017
Samsung Gear Sport, anyị nwalere ya na IFA 2017
Oge kachasị mma maka Samsung Galaxy S6 Edge Plus
Etu ị ga-esi banye ọnọdụ Download na Samsung Galaxy S8
Olee otu idozi Samsung Galaxy S8 na S8 Plus red screen nsogbu
Mgbọrọgwụ na Iweghachite maka Samsung Galaxy S6 Edge Plus na ukara gam akporo Nougat
Etu ị ga - esi melite Samsung Galaxy S6 Edge Plus na gam akporo 7.0 site na Odin site na nzọụkwụ